Qufulka App, si aad ula wareegto asturnaanta barnaamijkaaga Android | Androidsis
Ma rabtaa inaad si buuxda ula wareegto Android-kaaga marka ay timaado asturnaanta? Hadday jawaabtu HAA tahay, ma dhaafi kartid mana seegi kartid talobixinta maanta maaddaama aniga aniga ay tahay mid ka mid ah barnaamijyada ugufiican ee lagu xakameeyo asturnaanta bartayada geenyada Android.
Codsi duug ah oo loo yaqaan dad badan oo hadda la yimaada qaabab cusub oo lagu daray, Taageerada aad ammaanka faraha Android, iyada oo aan loo baahnayn in la siiyo rukhsad maamul, taasi waa, looma baahna in lagu dhejiyo maareeyaha qalabka si aysan u luminin waxqabadka faraha ee qalabkeena Android.
Codsiga su'aashu waxay ka jawaabaysaa magaca Qufulka AppLock, waxaan si bilaash ah uga heli karnaa Google Play Store iyadoo ikhtiyaar u ah xayeysiis isku dhafan iyo iibsashada abka, in kasta oo aan horeyba kuugu sheegay ugu yaraan Uma baahnin in aan maciinsado mid ka mid ah wax iibsiyada si aan uga faa iidaysto dalabka.
0.1 Ka soo degso AppLock Lock bilaash Google Play Store adoo gujinaya xiriiriyahan
1 AppLock Sawirka Sawirka
Ka soo degso AppLock Lock bilaash Google Play Store adoo gujinaya xiriiriyahan
Shaqada ugu weyn ee ay AppLock na siiso ma aha mid kale oo aan ahayn tan awood u yeelo inaad ku darto qufulka barnaamijyada ku rakiban barnaamijkeena Android si aad uga ilaaliso marinka aan la fasaxin In kasta oo terminalkeena Android uu furan yahay oo shaqeynayo.
Nooca qufulka waxaa sii dheer awood u lahaanshaha qaabka furitaanka ama lambarka sirta ah, hadda waxay sidoo kale aqbashay qaabeynta aasaasiga ah ee sawirka faraha ee ka diiwaangashan goobaha terminal-keena Android. Tani waa horumar weyn iyo waxqabad weyn oo lagu daray maadaama ay nasiinayso raaxo weyn anagoon luminin iota amniga.
Marka laga reebo awood u lahaanshaha xannibaadda iyo hubinta helitaanka codsi kasta oo la soo dejiyey oo lagu rakibay barnaamijkeenna 'Android', xitaa nidaamka codsiyada ama shaqooyinka sida kicinta firfircoonida isku xirnaanta xogta, Bluetooth iyo Wifi, Waxay kale oo ay leedahay ikhtiyaar ay si toos ah u xakameyso codsi kasta oo cusub oo lagu rakibo aaladdayada Android, haddii laga soo dejinayo Play Store si rasmi ah ama haddii aan ku rakibno dibadda annagoo soo degsaneyna faylka apk-ga.
Sida haddii tani u muuqato inaysan ku filneyn, sidoo kale waxay leedahay aaladaha amaanka sida keydka si sawiradeena iyo fiidiyowyadeenaba si gaar ah loogu ilaaliyo oo kaliya laga heli karo xulashada kaydka dalabka. Ikhtiyaar kale oo lagu muujiyo waa qaadashada sawirrada shisheeyaha kuwaas oo isku dayay inay galaan barnaamijkayaga 'Android' oo aan ogeyn qaabka furitaanka ama furaha furaha.
Kadibna waxay leedahay xulashooyin sida ugufiican u awood badan abuuro astaamaha isticmaalka gaarka ah, shuruud ahaan awood u siinaysa codsiyada aan dooneyno in nala xannibo marka aan kicineyno astaanta kor ku xusan hal guji, sidoo kale waxay leedahay xulasho aad u faa'iido badan oo aan ku awood u siiso astaamaha sida ku xusan meeshayaga oo ku saleysan shabakadda Wi-Fi ee aan ku xirnayn.
Tusaale ahaan, marka aan ku xirnaano shabakad dadweyne oo loo yaqaan tan maqaaxiyo aan jecel nahay, waxaan awood u yeelan karnaa ikhtiyaarka si marka aan ugu xirno Wifi-gaas gaarka ah, xayiraadda amniga ugu badan ee dhammaan codsiyada aan ka soo koobnay goobaha codsiyada.
Laakiin dhammaan kuwa ay dhammaan xulashooyinkani ama waxqabadyadoodu ay yaqaanaan wax yar, waxaan sidoo kale leenahay a Bog furaha aan qarsooneyn ee lagu dhex dhisay barnaamijka, aag aan si nabadgelyo leh ugu xirmi karno shabakadaheena bulshada sida Twitter, Facebook, Google+ iyo Linkedin anagoon haysan dalabyadii asalka ahaa.
Waxaas oo dhan iyo inbadan oo lamid ah suurtagalnimada soo dejiso oo ku dabaq mawduucyada ama maqaarka si bilaash ah si aad u siiso arjiga taabasho ka duwan iyo ka dib markaan si fiican u tijaabiyay maalmo yar, waxaan ku soo gunaanaday taas AppLock waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu wanaagsan ee lagu xakameeyo laguna ilaaliyo asturnaanta astaamaheena Android iyada oo aan la siinin waxqabadka in qufulka faraha ee Android-keena uu na siinayo.
Halkan ka degso Qufulka App
AppLock Sawirka Sawirka
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Qufulka App, mid ka mid ah barnaamijyada ugu wanaagsan ee lagu xakameeyo asturnaanta Android-kaaga